de gaga enao fa inona no hidiran'i Jaona Elite amin'ny fananampianakaviana
Par: mazava be
Date: 12 février 2018 - 21:05
de gaga ny tena fa ny porofo navoakan'i Jaona elite de fananan'olotsotra daholo fananampianakaviana inona moa no hidirany amizany raha hamidiny amna milliard amin'ny sinoa ary ny taniny misy tompony daholo tompoka ny tany lasany sinoa ary fifanarahana olotsotra sy sinoa no nisy.
Re: de gaga enao fa inona no hidiran'i Jaona Elite amin'ny fananampianakaviana
Date: 13 février 2018 - 10:02
matahotra fifaninanana @ sinoa lery ny fijeriko azy
fa izy moa no uzy sahy hanohatra sinoa? ny be kintana azy ataon-dry kely maso muteny irery manidy tsena
Date: 13 février 2018 - 11:41
Mazava be ny fanazavany
Raha tsy misy marina ireny zavatra lazainy ireny, manan-jo hitory ny commune satria manala baraka sy manely vaovao tsy marina
Fa matoa mangingina ny commune dia milaza ny marina ileiry izany.
Toy izao ny fanazavany tamin'iny resaka fifanarahana 3P iny : Partenariat Public/Privé :
Amidin'ny commune amin'ny mpandraharaha privé ny espace sy ny tany malalaka rehetra eto Antananarivo Renivohitra.
Hanaovandry zareo Centre Commercial, na Espace pour boutique, na espace pour épicerie, na espace pour gargote
Nefa ireo infrsatructure ireo indray dia amidin'ireo mpandraharaha ireo na ahofany amin'ny vidiny lafobe na hofany lafobe
Ny ao ambadika dia fanilikilihana amin'ny fomba ankolaka an'ireo mpandraharaha Gasy madinika (vendeur informel) ,
satria dia kely dia kely ny chiffre d'affaire an'ireny mpivarotra amoron-dàlana ireny.
Fa ny mpanamb-bola sy ny sinoana izany sisa no mameno tànana.
Date: 13 février 2018 - 15:05
zah tsy mino hoe namidin'i cua zany izay tany malalaka satria izy ve de hamerina
ny fahadisoan'i teo aloha izay nivarotra zaridaina antanimbarinandriana sns ;
debat face a face ihany no ahitana ny tena marina .
Date: 14 février 2018 - 06:33
F'angaha moa ny olona tsy mizaka zom-pirenena Malagasy afaka mividy tany fa tsy manofa @ longue duree fotsiny e!
Ataovy ny recoupement fa tena marina zany tena namidy daholo ireo ary mba ataovy ny sondage @ ireo devant ny super music ireo aloha fa ireo dia lasa tompony f'aza dia varina loatra é!
TENA SINOA SY KARANA daholo ary gasy vitsy² mpanana no tompony esplanade zao é!
Date: 14 février 2018 - 07:33
mba mahalala ny atao hoe espace public ihany ny tenanay ary mahafatatra tsara ny fifanarahana anisany nivarotra taminy sinoa fa fananan'olotsotra tompoko no teo amireny trano mijoalajoala rehetra eto antanana reny namidiny tamin'ny sinoa satria ny sinoa nahasahy lafo amin'ny mahampandraraha azy de izy ndray no mampanofa ho an'izay sahy marihana fa lafo koa ny hofany marary ny fon'ny jaona elita satria miaenjana ny fifaninanana eo am tsenany ary ny sinoa de adva enjana ka tsy mahagaga raha mivovo oh dog lery refa tsy mahasaky hofatrano de any antsimondrano mivarotra fa ytsy manendrikendrik'ol eo
Raha ho ahy olon-tsotra tsy mpivarotra dia mety amiko raha magazay ny eny amoron-dalana fa tsy mpivarotra madinika ireny, fa zany hoe sao dia hanao oh etsy Soarano izay na dia efa misy magazay ary dia mbola feno mpivarotra koa
Date: 16 février 2018 - 15:15
1) Raha marina ny voalazan'ny Jaona E. dia inona ny vahaolana arosony raha izy no ben'ny tanana?
2) Maninona tsy aharenesana feo ny mpanolotsainan'ny tanana raha toa ka misy ny zavatra tsy mety ataon'ny ben'ny tanana?
3) Tsy afaka hiara-hiasa mihitsy ve ny gasy fa tsy maintsy hifamingana? Tombontsoa ho an'iza ny korontana sy ny disadisa?
Date: 16 février 2018 - 15:27
ampianaro ny zaza anaja olona aloha voalohany indrinadra